နေ့ချင်းညချင်းအကျိုးစီးပွား, ကြည့်ရန်အတွက်ရွှေ့, ဒါမှမဟုတ်လဲလှယ်ရေးနှုန်း - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ | ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | FX စက်ရုပ်
ပင်မစာမျက်နှာForex ကျောင်းစာအုပ်နေ့ချင်းညချင်းအကျိုးစီးပွား, ကြည့်ရန်အတွက်ရွှေ့, ဒါမှမဟုတ်လဲလှယ်ရေးနှုန်း
အကြောင်း5ညနေ EST (အချိန်အချို့သောပွဲစားနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသည်) သင်ဈေးကွက်၌သင်တို့ကိုထူထောင် margin နဲ့အနေအထားပေါ် မူတည်. သင့်ရဲ့ပွင့်လင်းရာထူး၏အပြည့်အဝအရွယ်အစားပေါ်တစ်ဦးအကျိုးစီးပွားတာဝန်ခံ, သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုအသိအမှတ်ပြု, ဒါမှမဟုတ် debited သည်ဖြစ်စေတစ်ပွင့်လင်းအနေအထားကိုင်ထားလျှင်မှာ ။ အတိုးနှုန်း differential အပေါ် မူတည်. သင်သည်လည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်မြှားရွှေ့ကြေးအဖြစ်လူသိများအကျိုးစီးပွားအခကြေးငွေ, ပေးဆောင်သို့မဟုတ်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
ဒီအတိုးနှုန်းဟုခေါ်သည် မှောက်သည်တစျတနျဖိုးကိုရက်စွဲ (အခြေချနေ့စွဲ) မှအိတ်ဖွင့်အနေအထားလာမည့်တန်ဖိုးကိုနေ့စွဲသို့ကူးလှိမ့်သောအခါကတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အကြောင်းမူကား, ကြည့်ရန်အတွက်ရွှေ့ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာသင့်ရဲ့အားဖြင့်အလိုအလျှောက်ထွက်သယ်ဆောင်ကြသည် ပှဲစား သငျသညျတနျဖိုးနေ့စွဲအတွက်အပြောင်းအလဲအတိတ်တစ်ပွင့်လင်းအနေအထားကိုင်ထားပါ။ နောက်ကွယ်မှာ, အခြေချနှစ်ခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနေ့ရက်ကာလ၌တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ကွောငျ့ 5PM မီကတနင်္လာနေ့ပါလျှင် ငွေကြေး တနင်္လာနေ့က 5PM ကုန်သွယ်ရေးနေ့စွဲအင်္ဂါနေ့ဖြစ်လာကြပြီးကြာသပတေးနေ့ကတန်ဖိုးကိုအဘို့ကုန်သွယ်ကြသည်ပြီးနောက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကတန်ဖိုးကိုအဘို့အအရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေကြတယ်။
ကြည့်ရန်အတွက်ရွှေ့5pm တွင် EST အတိတ်ပွင့်လင်းရာထူးသက်ဆိုင်
rollOver တန်ဖိုးကိုနေ့စွဲအတွက်5ညနေ EST ပြောင်းလဲမှု, သို့မဟုတ်အခြေချနေ့စွဲပြီးနောက်ရာထူးဖွင့်လှစ်ရန်လျှောက်ထားကြသည်။ သငျသညျတနျဖိုးနေ့စွဲအတွက်အပြောင်းအလဲကျော်သင့်ရဲ့ရာထူးယူမသွားဘူးဆိုရင်သူတို့ကလျှောက်ထားမဟုတ်ပါကြသည်; သငျသညျဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်5ညနေရှေ့၌သင်တို့ကုန်သွယ်ရေးကိုပိတ်ဖို့လျှင်ဤသို့, သငျသညျစာမျက်နှာပေါ်တွင်မြှားရွှေ့တာဝန်ခံသို့မဟုတ်ငွေထုတ်ခံရဘယ်တော့မှလိမ့်မည်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တစ်3ရက်ကြာစာမျက်နှာပေါ်တွင်မြှားရွှေ့သယ်ဆောင်
5PM EST တွင်စာမျက်နှာပေါ်တွင်မြှားရွှေ့ကုန်ကျစရိတ် / အကျိုးအမြတ်မဆိုသလောက်ကိုသုံးကြိမ်ဖြစ်သွားကြသည်ဆိုလိုတာကသောကြာနေ့မှတနင်္လာနေ့မှဗုဒ္ဓဟူးနေ့တန်ဖိုးကိုနေ့စွဲပြောင်းလဲမှုများကိုတစ်သုံးနေ့ကစာမျက်နှာပေါ်တွင်မြှားရွှေ့ (စနေနေ့, တနင်္ဂနွေ, တနင်္လာ) ဆိုလိုတာကတစ်ဦးတနင်္ဂနွေစာမျက်နှာပေါ်တွင်မြှားရွှေ့, အခြားနေ့ဖြစ်၏။
သငျသညျငွေကြေးအရောင်းအဝယ်ဖြစ်ကြသောအခါသောကြောင့်, သငျသညျငွေသားအရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေကြတယ်။ သင်တစ်ဦးငွေကြေးအပေါ်ကြာမြင့်စွာသွားရတဲ့အခါ, တကဘဏ်မှာသိုက်ကိုင်ဆောင်တူဖြစ်တယ်, သင်သည်သင်၏သိုက်အပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုဝင်ငွေမျှော်လင့်လိုနှင့်သင်တစ်ဦးငွေကြေးအပေါ်ရေတိုသွားသည့်အခါ, ကငွေချေးကဲ့သို့ဖြစ်၏, သင်အကျိုးစီးပွားဆပ်ဖို့မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည် ချေးငွေအပေါ်။ ငွေကြေးတစ်စုံနှင့်အတူသင်တစ်ဦးအပြုသဘောချိန်ခွင်လျှာ (သင်ရှည်လျားများမှာငွေကြေး) နဲ့တဦးတည်းငွေကြေးကိုင်ဆောင်ကြသည်နှင့်တစ်ဦးအနှုတ်ချိန်ခွင်လျှာ (သင်တိုတိုများမှာငွေကြေး) နဲ့တဦးတည်းကို၎င်း, ၏အတိုးနှုန်းတို့အကြားကွာခြားချက်ကြောင့်သဏ္ဌာန်ကိုပိုမိုရှုပ်ထွေးဖြစ်လာ နှစ်နိုင်ငံဟုခေါ်သည် အတိုးနှုန်း differential.
သငျသညျအသိအမှတ်ပြုသို့မဟုတ် debited နေကြပါတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ခုအချက်များပေါ်တွင်မူတည်: သင်ကြာမြင့်စွာသို့မဟုတ်အတိုအနေအထားကိုကိုင်ဆောင်နေကြသည်ဖြစ်စေ 1); နှင့် 2) သင်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေသောစုံတွဲအတွက်နှစ်ဦးငွေကြေးအကြားအတိုးနှုန်း differential ။
တိုင်းငွေကြေးကုန်သွယ်မှုငွေချေးကပါဝငျကတည်းကအခြားဝယ်ဖို့တစ်ငွေကြေး, အကျိုးစီးပွားစာမျက်နှာပေါ်တွင်မြှားရွှေ့စွဲချက်၏အစိတ်အပိုင်းများမှာ Forex ကုန်သွယ်။ အတိုးချေးသောငွေကြေးအပေါ်ပေးဆောင်နှင့်ဝယ်သောတရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုခုနှစ်, သင်သည်သင်၏ရာထူး၏ညှနျကွားပေါ် မူတည်. အတိုးဝင်ငွေသို့မဟုတ်ပေးဆောင်။ သင်ချေးကြသည်တထက်ပိုမိုမြင့်မားအတိုးနှုန်းနှင့်အတူငွေကြေးဝယ်ယူနေတယ်ဆိုရင်, ပိုက်ကွန် differential ကိုအပြုသဘော (ဆိုလိုသည်မှာ AUD / အမေရိကန်ဒေါ်လာ) ဖြစ်လိမ့်မည် - နှငျ့သငျတဲ့ရလဒ်အဖြစ် (အသိအမှတ်ပြုခံရ) ရန်ပုံငွေများကိုရရှိမည်။ သင်ချေးကြသည်တထက်ပိုမိုမြင့်မားအတိုးနှုန်းနှင့်အတူငွေကြေးရောင်းနေတယ်ဆိုရင်, ပိုက်ကွန် differential ကိုအနုတ်ဖြစ်လိမ့်မည်, သင်ကစာမျက်နှာပေါ်တွင်မြှားရွှေ့ဘို့ (debited ခံရ) ပေးဆောင်တက်အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါကြည့်ရန်အတွက်ရွှေ့ကုန်ကျစရိတ် / ခရက်ဒစ်ပိုကြီးတဲ့အနေအထား, သင်ဖို့အပိုကြီးကုန်ကျစရိတ်သို့မဟုတ်အမြတ်နှင့်အတူ, သင့်အနေအထားအရွယ်အစားပေါ်အခြေခံထားပါတယ်။
ဘယ်လိုတစ်ခုမှာကွဲပြားခြားနားတဲ့နိုင်ငံများ၏အတိုးနှုန်းထဲက Find ပါသလား
ဥပမာအားဖြင့်, www.worldinterestrates.info (မတ်လ 2013 ၏အဖြစ်တိကျမှု) အောက်ကတယောက်တူစားပွဲပေါ်မှာဖတ်တဲ့လွယ်ကူသောအတွက်အတိုးနှုန်းတင်ဆက်:
အထက်ပါဇယားကနေ, သင်၏ပါးလွှာ 3.00% ထက်က 0.25% ၏သြစတြေးလျနှုန်းကိုသိသိသာသာကြီးမြတ်စုရုံးနိုင် အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအဘို့, ဒီတစ်ခုရှည်လျားသောသြစတြေးလျဒေါ်လာဖြစ်ခြင်းနှင့်အတိုကအမေရိကန်ဒေါ်လာ (ဆိုလိုသည်မှာ, ရှည်လျား AUD / အမေရိကန်ဒေါ်လာ) ဖြစ်ခြင်းအတွက်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားမှုဝင်ငွေမယ်လို့ဆိုလိုပေသည်။ တကယ်တော့ဒီအချိန်မှာတဦးတည်း၏အပြင်ဘက် (မည်သည့်အခြားအဓိကငွေကြေးဆန့်ကျင်ရှည်လျားသောသြစတေးလျဖြစ်ခြင်းကပိုငွေရှာနိုင် တရုတ်နိုင်ငံ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အမေရိကန်တစ်ဒေါ်လာထက်အကျိုးစီးပွားအတွက်အများကြီးနိမ့်များမှာအဖြစ်အိန္ဒိယ) ။
သင်မည်သို့ (အထွေထွေခုနှစ်တွင်) တစ်ဦးကအထူးငွေကြေး Pair ကို၏ကြည့်ရန်အတွက်ရွှေ့နှုန်း calculate ကိုသလား?
စာမျက်နှာပေါ်တွင်မြှားရွှေ့ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာသင့်ရဲ့ Forex အားဖြင့်အလိုအလျှောက်ထွက်သယ်ဆောင်ကြသည်ဟုစိတျထဲမှာသည်းခံပါ ပှဲစား သငျသညျတနျဖိုးနေ့စွဲအတွက်အပြောင်းအလဲအတိတ်တစ်ဦးအနေအထားကိုင်ထားပါ။
စာချုပ်လက်တွေ့တန်ဖိုးကိုက x (အခြေစိုက်စခန်းငွေကြေးအတိုးနှုန်း - ကိုးကားငွေကြေးအတိုးနှုန်း) / တစ်နှစ်လျှင် 365 ရက်ပတ်လုံးလက်ရှိအခြေစိုက်စခန်းငွေကြေးနှုန်းမှာ = နေ့စဉ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်မြှားရွှေ့အတိုးငွေထုတ် / အကြွေး x
ဥပမာ ကြည့်ရန်အတွက်ရွှေ့တွက်ချက် အမေရိကန်ဒေါ်လာအတွက်:
စာမျက်နှာပေါ်တွင်မြှားရွှေ့အချိန်တွင် AUD / အမေရိကန်ဒေါ်လာစျေးနှုန်း 1 နေစဉ်သငျသညျ 1.0486 တွေအများကြီး AUD / အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုဝယ်ကြလော့။ သငျသညျ5မှာခံယူ / မည်မျှလဲလှယ်ပေးချေသင့်ပါတယ် PM ? EST AUD /5မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာစျေးနှုန်း: 00 PM EST: 1.0486
သြစတြေးလျတနှစ်လျှင်နှုန်း = 4.75% Borrow
- / 0.25 * 100,000 $ 4.75 * (0.25% 365%): အမေရိကန်သမ္မတနှုန်း annumTherefore နှုန်း = 1.0486% ချထား
နောက်ထပ်: $ dayThat နှုန်း 100,000 * 4.50% / 382.74 = 11.75 နေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာပြောင်းလဲနိုင်သည်ရုံဥပမာတစ်ခုနှင့်လဲလှယ်ခဲ့သည်။
မှတ်ချက်: ပြထားတဲ့အတိုးနှုန်းနေ့စဉ်အခြေခံကျော်ပေးဆောင်ကြောင့်ကျနော်တို့ 365 ကိုအသုံးပြုပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်သည်တစ်ဦးတည်းသာနေ့ကဖွင့်အနေအထားထားရှိမည်ကတည်းကကျနော်တို့ 365 အားဖြင့်ခွဲရန်ရှိသည်။
သင်ကူညီမှတစ်ဦးအေးမြဂဏန်းတွက်စက်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်ကာလ၏နံပါတ်ကျော်တစ်ဦးအနေအထားသယ်ဆောင်ရန်ဖြစ်လျှင်, သင် Oanda အကျိုးစီးပွားဂဏန်းတွက်စက်ကိုသုံးနိုင်သည်တရားစွဲဆိုခံရစေခြင်းငှါ, လက်ရှိအလားအလာအပြုသဘောသို့မဟုတ်အပျက်သဘောစာမျက်နှာပေါ်တွင်မြှားရွှေ့တွက်ချက်။
သငျသညျအစဉ်အမြဲအပြည့်အဝစာမျက်နှာပေါ်တွင်မြှားရွှေ့တွက်ချက်မှုတန်ဖိုးထားဖို့ 24 ထက် သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်ကျင်းပခဲ့သောနာရီညွှန်ပြချင်ပါတယ်။
မှတ်စု: ဒီတွက်ချက်မှုကိုသင်ရှည်လျားသို့မဟုတ်အတိုများမှာငွေကြေးတစ်စုံ၏လက်ရှိစာမျက်နှာပေါ်တွင်မြှားရွှေ့မှုနှုန်း၏တစ်ဦးကောင်းစိတ်ကူးပေးသည်, ဒါပေမယ့် Oanda ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နှုန်းထားများဖို့အထူးသဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အထူးသဖြင့်အရစ်ကျ၏လက်ရှိစာမျက်နှာပေါ်တွင်မြှားရွှေ့မှုနှုန်းကိုသိရန်, သင်အောက်က tools တွေကိုသုံးနိုင်သည်။
မဆိုပွဲစားမဆို Pair ကို၏ညတွင်းချင်းအကျိုးစီးပွားကိုကြည့်ပါရန်လျင်မြန်စွာ Way ကို
သင်သည်သင်၏တစ်ဦးချင်းစီငွေကြေးကို pair တစုံ၏စာမျက်နှာပေါ်တွင်မြှားရွှေ့မှုနှုန်းကိုသိလိုလျှင်, ထိုကဲ့သို့သော FXCM ရဲ့ tradestation အဖြစ်အချို့သော Forex ပလက်ဖောင်းကဤအထူးနှုန်းထားများထုတ်ဝေရန်။ သို့သော်သင်တစ်ဦးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေကြလျှင် MT4 ပလက်ဖောင်းကသင်သည်အောက်ပါနှစ်ခုလျှောက်ထားနိုင်ပါသည် MT4 သင့်ရဲ့ဇယားမှသတင်းအချက်အလက်ညွှန်းကိန်း:
StatMonitor_1.1Phat-.mq4 displays Spread, ဝယ် / ရောင်းလဲလှယ်ရေး, ဇယားသင်္ကေတ၏ Volume ကို
Display ကိုအင်ဖိုအားလုံး Pairs.ex4 Author: Hanover ။ မျိုးစုံအားလုံးပေါ်တန်ဖိုးရှိသောသတင်းအချက်အလက်များဖော်ပြပေး: Pair ကိုအတိုကောက် [Column1] လေလံစျေး [Column2(စတစ်% ကဲ့သို့) ပျမ်းမျှနေ့စဉ် Range မှနေ့ Range ၏] အချိုး [Column3-5], (လည်း ADR ၏% ကဲ့သို့) ပျံ့နှံ့ [Column6-7] Pip Value ကို [Column8] ယ်ယူရန်လဲလှယ်ရေးနှုန်း [Column9] လဲလှယ်ရေးနှုန်းရောင်း [Column10].
အဆိုပါလျှောက်ထားသောဤနေရာလေးကိုညွှန်ကိန်းနှစ်ခုလုံး၏တစ်ဦးကဓာတ်ပုံတစ်ပုံ AUDUSD FXPro ၏ဇယားဤကဲ့သို့သောကြည့်:
ပထမဦးဆုံးညွှန်ပြချက်, StatsMonitor_1.1Phat.mq4, (က 20 ဂဏန်းပွဲစားကြောင့် 2.0 pips ဖြစ်သော)5တစ်ပြန့်ပွား, 14.83 တစ်ဦးဝယ်လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်နှင့် 17.06 တစ်ရောင်းချခြင်းလဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်သင်ကစာမျက်နှာပေါ်တွင်မြှားရွှေ့အချိန်အတိတ်ကကျင်းပလျှင်မည်သည့်သာမန်စာမျက်နှာပေါ်တွင်မြှားရွှေ့နေ့၌ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မှလွဲ. , သင် AUD / အမေရိကန်ဒေါ်လာရှည်လျား 14.83 စံအနေအထားဖြစ်ခြင်းများအတွက် $ 100,000 တစ်အကြွေးကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်, သင်တိုတောင်းဖြစ်ခြင်းများအတွက် $ 17.06 တစ်နှုတ်ယူခြင်းလက်ခံရရှိလိမ့်မည် AUD / အမေရိကန်ဒေါ်လာ၏ 100,000 စံအနေအထား။ ဒုတိယညွှန်ပြချက်, အင်ဖိုအားလုံး Pairs တင်ပြပါ။ ex4, display ကိုလေလံစျေးနှုန်းပျမ်းမျှနေ့စဉ်အကွာအဝေး, ပြန့်ပွား, PIP တန်ဖိုးနှင့်အားလုံးတစ်မျိုးပေါ် / ရောင်းလဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်သတင်းအချက်အလက်ဝယ်သင်သည်အပိုင်းအစအားဖြင့်ဤအချက်အလက်အပိုင်းအစရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ကြိုးစားနေအတွက်အချိန်အများကြီးချွေတာ, pair တစုံဖွငျ့ pair တစုံ။ တစ်တစ်ချက်မှာသငျသညျလျင်မြန်စွာ AUD / အမေရိကန်ဒေါ်လာလာမည့်အတူသယ်မည့်အိတ်ကုန်သွယ်မှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်သောအရာကိုစဉ်းစားသူမည်သူမဆိုများအတွက်အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များပါလိမ့်မယ်အရာ, တခြားသူတွေထက်အများကြီးပိုမိုမြင့်မားလဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်မှုနှုန်းရှိကြောင်းတွေ့နိုင်ပါသည်။
တစ်ခုစံပြကမ်ဘာပျေါတှငျအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောလဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်နှုန်းမှာတန်းတူမှုနှုန်းဖြစ်သင့် (ထိုအထက်ပုံဥပမာအတွက်ဖြစ်တယ်, နှစ်ဦးစလုံး AUD / အမေရိကန်ဒေါ်လာများ၏အပြုသဘောဆောင်နှင့်အပျက်သဘောလဲလှယ်ရေးအစီအစဉ် 14.83 ဖြစ်သင့်), ဒါပေမယ့်အစား, အကအနုတ်လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်မှုနှုန်းများသောအားဖြင့်အများကြီး သာ. ကြီးမြတ်ပုံပေါ် အပြုသဘောလဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်နှုန်းထက်။ ဒါကဖြစ်ကောင်းတရားမျှတမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်ကအရစ်ကျဂိမ်းကို set up ဖြစ်ပါတယ်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကုန်သွယ်သမိုင်း 1 နေ့ကထက်ပိုပြီးကျော်ထွက်သယ်ဆောင် Long နှင့်ဘောင်းဘီတို၏တစ်ဦးတန်းတူအရေအတွက်ကတင်ပြခဲ့ကြသည်လျှင်, သင်ဖြစ်ကောင်းအားလုံးသင့်ရဲ့အရောင်းစုစုပေါင်းအပေါ်တရားစွဲဆိုထားတဲ့ခြုံငုံအနုတ်လက္ခဏာလဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်ရှိလိမ့်မယ်။ ဒါဟာအများကြီးထွက်မလာပေမဲ့သင်ကုန်သွယ်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်အဖြစ်တွက်တက်အဆုံးသတ်ဖို့ရှိသည်တစ်ခုခုပါပဲ။
သင်တို့သည်လည်းအချို့သောပွဲစားတစ်ဦးငွေကြေးကို pair တစုံရှည်လျားသို့မဟုတ်အတိုဖြစ်စေဖြစ်ခြင်းများအတွက်အနုတ်လက္ခဏာလဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်နှုန်းကိုခံရလိမ့်မည်ဟုရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်။ သင်တစ်ဦးကိုတွေ့မြင်ခဲ့လျှင် ပှဲစား ဤသို့ပြု, သငျသညျကိုယျတျောနှငျ့အကောင့်တစ်ခုရှိခြင်းပြန်လည်စဉ်းစားချင်ပေလိမ့်မည်။
1 ။ အပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးစီးပွား၏ Direction အဖွဲ့ထဲမှာကုန်သွယ်ရေး။
သင်သာအပြုသဘောလဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်ပေးသောငွေကြေး၏ညှနျကွားထဲမှာကုန်သွယ်ရေးသွားနိုင်ပါတယ်။ ကြောင်းတိကျတဲ့ဦးတည်ချက်အတွက်ကုန်သွယ်ပြန်စမ်းသပ်ပြီးနှင့်ရှေ့ဆက်စမ်းသပ်ကုန်သွယ်ရလဒ်များကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌အများဆုံးကျေးဇူးအလျှင်းမပြုဘဲဦးတည်ချက်ထားသည် မှလွဲ. ဤသည်ကိုယေဘုယျအားအကြံပြုသည်မဟုတ်။
2 ။5pm တွင်: 00 အားဖြင့်ကုန်သွယ်ရေးသာ Intraday နှင့်ပိတ်ရာထူး။
သငျသညျစာမျက်နှာပေါ်တွင်မြှားရွှေ့အချိန်မတိုင်မီနှင့်ထုတ်ကြောင့်သင့်အနေဖြင့်လဲလှယ်ရှောင်ရှားလိမ့်မယ်။ သို့သျောလညျးသငျသညျတခု intraday ဖြစ်လာမှဆုံးဖြတ်မထားသင့် ကုန်သည် အဆိုပါလဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်၏။ အကြောင်းမူကား, သင်တစ်ဦး intraday ဖြစ်လာပါစေနိုင်သောတစ်ခုတည်းသောအကြောင်းပြချက် ကုန်သည် သင့်ရဲ့ဖြစ်သင့် ဗျူဟာ နှင့်သင့်စွမ်းဆောင်ရည်ရလဒ်များကို intraday ဖြစ်ခြင်းအပေါ်အားကိုး။ မဟုတ်ကြောင့်လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်၏။
3 ။ တချို့ကပွဲစားတို့ကကြသူများတစ်လဲလှယ်ရေးအခမဲ့အစ္စလာမ့်အကောင့်ကိုထဖွင့်ပါ။
ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ဆိုပါကအဖြစ်မှန် Non-မွတ်စလင်များအတွက်မကြာခဏအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါသော်လည်းဒီမွတ်စလင်ဖောက်သည်ကမ်းလှမ်းသည့် option တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားအထူးသဖြင့်အကောင့်အစ္စလာမ့်ယုံကြည်ချက်များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအရောင်းအပျေါ၌ပေးဆောင်ခံရဖို့အဘယ်သူမျှမစိတ်ဝင်စားမှု၏မူဝါဒနှင့်အတူအပြည့်အဝလိုက်နာအတွက် run နေကြသည်။ သငျသညျသင်သည်များစွာသောနေ့ချင်းညချင်းအရောင်းအရှိခြင်းပါလိမ့်မည်ယုံကြည်လျှင်သင်တစ်ဦးလဲလှယ်အခမဲ့အစ္စလာမ့် account ကိုဖွင့်လှစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါသည်ဤသုံးမျိုးရဲ့အကောင်းဆုံး option တစ်ခုဖြစ်သည်ထင်, ငါတစ်ခုကိုမြင်ရလျှင် ပှဲစား ဒီ option ကိုကမ်းလှမ်းငါစိတ်အားထက်သန်စွာကယူပါ။
သပိတ် FX EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတား EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
သင်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ငွေကြေးကို pair တစုံ၏စာမျက်နှာပေါ်တွင်မြှားရွှေ့မှုနှုန်းကိုဘယ်လိုတွက်ချက်ကြဘူး
မဆိုပွဲစားများ၏မဆို Pair ကို၏ညတွင်းချင်းအကျိုးစီးပွားကိုကြည့်ပါရန်လျင်မြန်စွာ Way ကို